ट्राफिकको मनपरी चेकिङ कति सहि कति गलत? - koselihk
Posted by koselihk | २० आश्विन २०७४, शुक्रबार १४:०९ | बिषेश समाचार |0|
मोरङ २० असोज २०७४
नेपालको धेरै जस्तो ठाउहरुमा ट्राफिक ब्यवस्थापन अस्तब्यस्त छ भन्दा फरक पदैन । सडक ब्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरी कमाउ धन्दामा छ वढि केन्द्रित भएको जनगुनासोहरु सुन्नमा पाईन्छ। आख़िर किन यस्तो भईरहेको छ त?
सडकमा सवारी दुर्सघटनाको कारण ज्यान गुमाउँनको संख्या दिनहु बढ्दो छ । तर सडक दुर्घट्नाको विषयमा गम्भिर भई कारण खोज्नुको साटो ट्राफिक प्रहरी चाडपर्वमा जरीवना काट्न रातो विल लिएर सडकमा जनता सँग दिनहु निहु मात्र खोजिरहेको देख्न सकिन्छ ।
कुनै नयाँ कार्यलय प्रमुख आए लगातै सडकमा ट्राफिकको तामझाम सुरु हुन्छ तर एक वर्षमा कुनै नियम पालना हुदैन,अन्तःत प्रमुखहरु प्रहरीकै भाषामा खोका लिएर कुम्लोकुटुरो बोकेर बाटो लाग्छन त्यो वर्षेनी हुन्छ । अहिले चाडवाडको समय पारेर देशको विभिन्न ठाउको सडकमा मनपरी ढंगबाट चेकिङ भईरहेको छ । जस्ले जहाँ पायो त्यहाँ चेकिङ गरीरहेका छन । ट्राफिक पोष्ट देखि जिल्ला हुदै क्षेत्रको चेकिङले सर्वसाधरण हैरान छन त्यो यर्थाथ हो ।
यसरी एक किलोमिटरमा एउटा चेकपोष्ट थापेर के जनतालाई दुख दिन खाजेको हो ? या चाडवाडमा कमाईखाने भाडो बनाउँन ? सडकमा जरीवना काट्दैमा के सवारी दुर्घट्ना राकिएला ? अभियुक्तहरु ५ सय देखि एक हजार सम्म जरीवना सकडमै काटेर छुट्ने प्रचलनले सवारी दुर्घट्ना कसरी रोकिएला ?
सडकमा काट्ने ट्राफिकको विल कस्ले छपाउँछ ? यो प्रश्न अब गम्भिर हुन सक्छ । ट्राफिकको मनपरी चेकपोष्ट सँगै कतै जरीवना बापत थमाउँने रसिद पनि दुईनम्वरी त छैन ? हैन भने लामो समय देखि सडकमै जरीवना चै किन काटिन्छ ? बैक सिस्टममा गएर किन जरीवना काट्न सुरु भएन ? कि कमाईखाने भाडो वनाईराख्न सडकमै विल थमाउँने हो । यो गम्भिर प्रश्न हो यसमा सरकारी निकायको ध्यान जानु जरुरी छ कि छैन?
जथाभावी विल थमाउँने ट्राफिक प्रहरीले विलको सदुपयोग गरेका छन कि छैनन् यस विषयमा प्रशासनले ध्यान दिनु जरुरी छ । जरीवनामा मात्र ध्यान दिनुको कारणले पनि ट्राफिक भित्र आर्थिक चलखेल छ भन्दा अन्यथा नहोला । ट्राफिकको कमजोर ब्यवस्थापनको कारण सडक दुर्घट्ना वढेको यथार्थ हो ।
थोत्रा र मनपरी कुदाईएका ठुला सवारीबाट मासिक रकम लिने र सानो सवारीलाई चेकिङको नाटक मात्र भएकै कारण ट्राफिक ब्यावस्थापन लामो समय देखि सुध्रिएको देखिन्नदैन । ट्राफिकले आफ्नो संगठनलाई चुस्त दुरुस्त वनाउँन सकेको छैन । केबल पैसा कमाउँन ट्राफिक अहिले ब्यस्त छ । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । घुस नदिई कामै हुदैन भन्ने सर्वसाधरणको भनाईमा किन चुप छन त्यो निकाय ?
अहिले पनि अधिकांस ट्राफिक प्रहरीमा सुधार आएको छैन वरु घमण्ड भने वढेको छ । समाजमा ट्राफिक प्रहरीहरु अहिले पनि सामाजिक भईसकेका छैनन् । तसर्थ ट्राफिक प्रहरीहरु सुध्रन आवाश्यक छ । घर सुधारेर मात्र सडक सुधारमा लाग्न यो पंत्तिकार ट्राफिक प्रहरी पूर्व क्षेत्रीय हाकिम राजकुमार लम्साललाई अनुरोध गर्छ ।
Previous१४ बर्षिय बालिकालाई हात बाँधेर , मुखमा मोसो दली सिस्नु पानीले कुटदै चरम अमानविय तवरले यातना
Nextपथरीशनिश्चरे स्थित विरेन्द्रनगरमा जारी पूर्वाञ्चल स्तरीय सातौ वीरेन्द्रनगर च्यालेञ्ज कप क्रिकेट प्रतियोगिता हुदै !
ईन्द्र लामिछानेको स्मृतिमा दोश्रो ईन्द्र बराह एम्युचर ओपन गल्फ प्रतियोगिता
७ फाल्गुन २०७२, शुक्रबार १७:१८
१९ माघ २०७२, मंगलवार ०१:४८